Pojbuky, Jihočeský kraj, Czechia
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguPavla
ICottage Blatnice ngasechibini laseKozák ligumbi lokuthunga elikhulu kubo bonke abafuna ukutshaja iitotshi zabo kumbindi wendalo. Jonga uxolo lwakho olulahlekileyo ehlathini, funda incwadi ongenalo ixesha elide, sela ikofu kwiveranda ngaphandle kokujonga iwotshi yakho, kwaye uziqhelanise neseti yakho yeyoga eqhelekileyo yokutshintsha elunxwemeni lolwandle. ichibi. Okanye utshintshe i-cottage kwi-ofisi yakho yasekhaya kwaye uqale ukwenza izinto ongenakukwazi ukugxila kuzo esixekweni.
Ukusuka ePrague, uhambo oluya kwindlu yethu luya kukuthatha malunga neyure. I-Cottage Blatnice inokufumaneka kumda we-Central Bohemia, i-South Bohemia kunye ne-Vysočina. Unokuhlala kuyo unyaka wonke, ixesha ngalinye lonyaka linento yokwenza nalo. Ikhuselo leglasi lidibanisa nawe kunye nendalo ejikelezileyo kwaye unokonwabela umbono wechibi kunye namahlathi ajikelezileyo.
I-cottage inkulu ngokwaneleyo ukuhlalisa abantu ababini, kodwa inani leebhedi, kodwa igumbi lokulala elivulekileyo eliqhelekileyo linokwamkela iindwendwe ezine. Kumgangatho ophantsi uya kufumana igumbi lokuhlambela elineshawa kunye nendlu yangasese, indawo yokuhlala enendawo yokutyela kunye nekhitshi kunye nendawo yomlilo. Phezulu kukho idesika yomsebenzi, ibhedi ephindwe kabini kunye nebhedi yesofa.
I-cottage ikwaneveranda egqunyiweyo enezihlalo, i-barbecue kunye nesikhephe echibini, apho unokuqubha ehlotyeni (okanye ngokwendlela yakho yokuqina unyaka wonke).
Umbuki zindwendwe ngu- Pavla